သတင်းစာ — Steemit
taylae (35) in esteem • last year
ကျနော်တို့ဆိုသတင်းစာတစ်ခုလွယ်ကူစွာရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ရုံဆိုသတင်းစာဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်က subscribe ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လူတိုင်းတိုင်းပြည်များ၏မျက်မှောက်ရေးရာ သိ. စိတ်ဝင်စားဖြစ်လာသည်။
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အဖြစ်အပျက်, ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအသစ်တွေနည်းပညာ, သုတေသန, နက္ခတ်ဗေဒင်, ရာသီအလိုက်အပြောင်းအလဲများ, သဘာဝဘေး, စတာတွေအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးသည်
သတင်းစာလည်းဒါဟာဘုံအများပြည်သူအမြင်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်နှင့်အမျိုးမျိုးသောလူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးကိစ္စများဖြေရှင်းရာတွင်ကူညီပေးသည်လူမှုရေးကိစ္စများ, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်, ယဉ်ကျေးမှု, ဓလေ့ထုံးစံ, etc လူနေမှု, ဘာဝနာ, ယောဂ၏အနုပညာအပေါ်ဒဏ်ငွေဆောင်းပါးများပါဝင်သည်။
ဒီအသုံးပြုခြင်းအခြားနိုင်ငံရေးပါတီများအပါအဝင်နိုင်ငံရေးသမားများ, သူတို့ကိုအကြောင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ, အချို့အစိုးရမဟုတ်သောမူဝါဒများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာစသည်တို့ကိုရှာဖွေရေးအသစ်သောအလုပ်အကိုင်များ, အကောင်းဆုံးကျောင်းကိုဝန်ခံဖို့ကျောင်းသားများ, လက်ရှိနှင့်အရေးကြီးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းကိုသိရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည်စျေးကွက်၏လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းအသစ်မဟာဗျူဟာများအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုကူညီပေးပါ
ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာဖတ်ရှုခြင်း၏အလေ့အထစေလျှင်သတင်းစာများကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးကူညီပေးပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝဲတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြင်ဘက်အကြောင်းကိုအရာအားလုံးကိုသိကြကုန်အံ့။
အဆိုပါအပြိုင်အဆိုင်စာမေးပွဲ၌ထင်ရှားဖို့ပြင်ဆင်နေကျောင်းသားများမှန်မှန်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်မျက်မှောက်ရေးရာနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သတင်းစာများကိုဖတ်ပါ။
esteem advantage reading newspaper time
last year by taylae (35)
Congratulations @taylae! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
ingyinmaung (43) · last year
aniehmar (41) · last year
I always read newspaper every morning.
ngawine (41) · last year
သတင္းစာေတြလည္း print ကေခတ္ကုန္သြားျပီ
auelork (41) · last year
taylae (35) · last year